योग गुरु स्वामी रामदेवमाथी मुद्दा दायर - योग गुरु स्वामी रामदेवमाथी मुद्दा दायर -
योग गुरु स्वामी रामदेवमाथी मुद्दा दायर
उज्यालो प्रतिनिधि ४ असार २०७८, शुक्रबार विश्व
नयाँदिल्ली । प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव माथि कोरोना महाब्याधी र यसका औधषीबारे भ्रामक तथा झुठा दाबी प्रस्तुत गरेको आरोपमा भारतको छत्तिस गढ राज्यको राजधानी रायपुर प्रहरीमा मुद्दा दायर भएको छ । रायपुर प्रहरीका अनुसार उनी विरुद्ध इन्डियन मेडिकल एशोसिएसनको छत्तिसगढ शाखाले याचिका दर्ता गराएको हो ।
उनीमाथि कोरोन महाब्याधीजस्तो खतरनाक रोगका विरुद्धमा प्रमाणित नभएका झुठहरु बोलेको, रोगबारे सर्वसाधारणमा असावधानी फैलाएको, कोरोना महामारीको खोप र प्रमाणिक औधषी विरुद्ध अविश्वास सृजना गर्न खोजेको र यस्त कार्य मार्फत् समाजको शान्ति र अमनचैनमा खलल पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ ।
निवेदनमा डा. विकास अग्रवाल र डा. राकेश गुप्तालगायतले हस्ताक्षर गरेको समाचार माध्यमले जनाएका छन । स्वामी रामदेवले विगत एक वर्ष यता एलोप्याथिक चिकित्सा प्रणाली, अक्सिन सिलिन्डरको प्रयोग, भेन्टिलेटर र कोरोना खोपबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने गरेका थिए । उनले कोरोना महामारीमा निधन भएका डाक्टरहरुको झुठो विवरण दिँदै ‘आफैलाई बचाउँन नसक्ने डाक्टरले बिमारलाई के बचाउँछन’ भनेका थिए ।